Sida loo Beddelaan WLMP Faylal ay si fudud loo wmv
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan WLMP Faylal ay si wmv
File WLMP A waa file mashruuca abuuray by Windows Live Movie Kan sameeyey a. Si kale haddii loo dhigo, file a .wlmp ma aha file video ah, oo ma waxaad ka ciyaari kartaa codsiyada video-ku salaysan, sida ciyaartoyda warbaahinta kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, Windows Live Kan sameeyey Movie laftiisa badalo karo files WLMP in wmv video files. Haddii diinta WLMP in wmv waa ujeedada, aad si toos ah u oofin karin diinta file in software taas. Iyo Furfuris waa wax fudud. Hadda, waxaan ku tusi doonaa talaabooyinka faahfaahsan.
Talaabada 1: Daahfurka Windows Live Movie abuuray.
Talaabada 2: Riix ah "File" menu, ka dibna ka submenu pop-up ah, doortaan "Open Project" fursad u dajiyaan mid ka mid ah files WLMP deegaanka si ay Windows Live Movie abuuray. Hadda, aad furay file ah mashruuca WLMP, oo soo socda, waxaad u baahan tahay oo u badbaadin doonaa sida file video ah.
Talaabada 3: Riix ah "File" menu mar kale, ka dibna tag "Save filimka" doorasho halkii. Waxaad arki doontaa wax badan ka mid ah goobaha dhanka midig. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah oo u badbaadin doonaa sida file filim. Sida caadiga ah, waxaan xulo goob Standard-qeexidda. Waxa uu na tusay sida soo socota.
Hadda, aad si guul leh ku badbaadi file WLMP aad qaab wmv. Just tagaan si ay folder wax soo saarka si ay u heli. Sidaas, waxaad si fudud u bedeli karaan WLMP in wmv.
Talooyin dheeraad ah: files WLMP kaliya loo furi karo in Windows Live Movie abuuray. Sidaas, noocan oo kale ah files ma ku haboon tahay in la qaybiyo ama wadaagaan. Waxaad jeclaan fiican si uu u badbaadiyo Windows Live Movie files mashruuca Kan sameeyey sidii wmv video files. Files wmv noqon kartaa mid taageero ugu badan ee codsiyada kale Windows, sida Windows media player. Laakiin haddii aad rabto in aad iyaga u ciyaaro ku saabsan barnaamijyada qaar ka mid ah oo aan ku taageeri karaan qaabab wmv, waxaad isticmaali kartaa a 3-xisbi weyn WLMP Converter si ay u badalo si dheeraad ah qaabab video for isticmaalka. Maxaa yeelay, Windows Live Movie Kan sameeyey oo kaliya loo isticmaali karaa sida WLMP ah in Converter wmv. Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) kaa caawin kara inaad badalo dhoofiyo files wmv in dheeraad ah qaabab video tayo weyn, sida AVI, MP4, MOV, FLV, VOB, DVD, 3GP, MPEG, iyo Mpg iwm Just download link hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Sida loo Beddelaan WLMP faylasha la WLMP Converter
Sida loo Beddelaan WLMP Faylal ay si AVI
Top 40 Music Videos Best
30 Shabakadaha in la abuuro kartoo Qalin-Dhigashada
Downloadhelper u Safari: Online Video Downloader u Safari